Abavelisi be-Hinge ye-Hinge | Yongeza
Ikhaya > Iimveliso > Hinge > IKhabhinethi hinge
IKhabhinethi i-Hinge ibalulekile impahla yediski yokuqhagamshela ucango lweKhabhinethi kunye nomzimba wekhabhathi, onokuba lula ukuvula umnyango weKhabhinethi.
I-odod hinges lukhetho lwakho lobulumko. Isiqinisekiso sethu se-hinges siquka iintlobo ezahlukeneyo ezahlukeneyo: I-finges enye, i-Hydraulic hinges, i-hinge efihliweyo, i-hinge efihliweyo, i-hinge yaseMelika njl. Sinezinto ezahlukeneyo zeHinges kunye ne-hinges ezahlukileyo Iimpawu zokufezekisa iimfuno zakho. Zonke iimveliso zethu ziye zavavanywa kwe-SGS ezingqongqo, kwaye i-hinge nganye iye yahlolwa ngokungqongqo.
I-odod hinges yeyona nto yethu iluncedo kwaye iboniswe izixhobo zeHardware. Kwangelo xesha, siyakwazi ukubonelela ngexabiso elifanelekileyo kwaye lilawule ngokungqongqo umgangatho.
Izinto zethu eziluhlaza ze-hinge zenziwa nge-iron esemgangathweni, intsimbi engenasibala, egudileyo kwaye icocekile, kwaye ingekho lula, kwaye inganyangeki netyuwa nenkungu. Ubugcisa obuhle bwenza i-hinge ivulekile kwaye ivale nangayiphi na i-angle kakhulu. Emva kwamashumi amawaka eeSwitches, isagudileyo kwaye ayinamathi.